ကြိုးစားလေ့လာရန်လှုံ့ဆော်မှု - ၁၀ ချက် | ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
ခက်ခဲလေ့လာရန်လှုံ့ဆော်မှု - ၉ ချက်
လေ့လာမှုကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်မယ့်အချက် ၁၀ ချက်ကိုမကြည့်ရှုခင်မှာ ဒါရိုက်တာ David Cantone ၏ဗီဒီယိုကိုသူကြည့်လို။ သူသည်မြန်မြန်ဆန်ဆန်လေ့လာရန်နှင့်အဆင့်ကောင်းရရန်အတွက်အကြံဥာဏ်များပေးသည်။
သင်သည်ကျောင်း၊ အထက်တန်းကျောင်း၊ တက္ကသိုလ်တွင်ဖြစ်စေ၊ မာစတာဘွဲ့ကိုသင်ယူသည်ဖြစ်စေဤအကြံပြုချက်များသည်အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။
လေ့လာမှုကိုလျှောက်ထားခြင်းသည်မလွယ်ကူလှပေ ကြိုးစားလေ့လာဖို့လှုံ့ဆော်ပေးမယ့်အချက် ၉ ချက်။
1 ၁။ သင်လေ့လာနေသည့်အကြောင်းအရာနှင့်စပ်လျဉ်း။ သိလိုစိတ်ရှိပါ။
2 ၂) အချိန်တန်လေ့လာရန်အချိန်ဇယားဆွဲပါ။
3 ၃။ စလေ့လာရန် ၅ မိနစ်အချိန်။
5 ၅။ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှအာရုံပျံ့လွင့်ခြင်းများကိုဖယ်ရှားပါ။
6 ၆။ သင်မလေ့လာမီခိုင်မာသောလှုံ့ဆော်မှုကိုထည့်သွင်းပါ။
7 ၇။ တတ်နိုင်သမျှအဆင်သင့်ဖြစ်သောလေ့လာမှုနယ်မြေတစ်ခုတည်ထောင်ပါ။
8 ၈။ ပန်းတိုင်များထားပါ။
9 ၉။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုတစ်ခုပေးပါ။
10 ၁၀) သင့်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးမည့်စကားစုများ -
၁။ သင်လေ့လာနေသည့်အကြောင်းအရာနှင့်စပ်လျဉ်း။ သိလိုစိတ်ရှိပါ။
သင်လေ့လာနေသောအကြောင်းအရာကိုသင်စိတ်ဝင်စားသောအခါအခြေအနေများပိုမိုလွယ်ကူလာသည်။ မင်းလေ့လာနေတာတွေကိုဘဝမှာဘယ်လိုအသုံးချနိုင်တယ်ဆိုတာလေ့လာပါ။ သင်တစ် ဦး စပ်စုသဘောထားကိုမွေးစားသောအခါခေါင်းစဉ်စိတ်ဝင်စားဖို့စေရန်နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။
သင်၌ရှိသောပင်ကိုသိလိုစိတ်ကိုနှိုးဆွပေးခြင်းဖြင့်သင်သည်မည်သည့်အရာကိုမဆိုလေ့လာနိုင်လိမ့်မည်။ သင်ဤသိချင်စိတ်ကိုနှိုးဆွရန်ကန ဦး ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကိုသာပြုလုပ်ရမည်။
နေ့စဉ်လေ့လာမှုအစီအစဉ်ကိုတည်ထောင်ပါ။ သင်၏တစ်နေ့တာကြိုတင်စီစဉ်ထားခြင်းသည်ကောင်းသည်။ သတ်သတ်မှတ်မှတ်လေ့လာရန်အချိန်နှင့်ကစားရန်သို့မဟုတ်အနားယူရန်အချိန်သတ်မှတ်ထားပါ။ သင်သည်ယခုပင်ကြိုးစားလေ့လာနေပြီးဖြစ်သော်လည်းနောက်ပိုင်းတွင်သင်ကိုယ်တိုင်ပျော်မွေ့မည်ကိုသင်သိသည်။
အကြံပေးချက်တစ်ခု - မင်းရဲ့တစ်နေ့တာကိုစီစဉ်တဲ့အခါအမြဲတမ်းလေ့လာပါ။ အကယ်၍ မင်းကတီဗွီကြည့်သင့်တယ်၊ မလေ့လာခင်ခဏအနားယူသင့်တယ်လို့ထင်ရင်မင်းအမှားကြီးလုပ်မိတယ်။ ဤအရာသည်သင်စတင်လေ့လာရန်ပိုမိုခက်ခဲစေလိမ့်မည်။ ပထမခြေလှမ်းမှာအမြဲတမ်းအခက်ခဲဆုံးဖြစ်သည်။
၃။ စလေ့လာရန် ၅ မိနစ်အချိန်။
အခက်ခဲဆုံးအပိုင်းကစတင်တာပါ။ ပထမခြေလှမ်းမှာအမြဲတမ်းအခက်ခဲဆုံးဖြစ်သည်။ ဒီပထမဆုံးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအပြီးမှာ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်အရှိန်အဟုန်ရပြီဆိုရင်ဆက်လုပ်ဖို့လွယ်ကူလို့ပါပဲ။
ကြိုးစားလေ့လာရန်ဤအကြံဥာဏ် - လှုံ့ဆော်မှုသည်သင်စတင်ရန်ကူညီနိုင်သည်။ ဤတွင်သင်လုပ်နိုင်သည် - သင်စတင်လေ့လာရန်လှုံ့ဆော်ခံရခြင်းမရှိသလောက် ၅ မိနစ်လေ့လာရန်စဉ်းစားပါ။ အဲဒါ ၅ မိနစ်ပဲ။ ၅ မိနစ်လောက်ကြာအောင်အလေးအနက်လေ့လာမယ်၊ ပြီးတော့ရပ်တော့မယ်။
များသောအားဖြင့် ၅ မိနစ်အကြာတွင်သင်ပိုမိုလေ့လာလိုသည်။ ဟုတ်တယ် အဲဒါလှည့်ကွက်ပဲ။ ဤနေရာတွင်သော့ချက်မှာ ၅ မိနစ်အတွင်းသင် ၁၀၀% လေ့လာရန်သေချာစေရန်ဖြစ်သည်။ အခြားအရာများနှင့်အိပ်မက်မမက်ပါနှင့်။
အနားယူရန်၊ စားသောက်ရန်သို့မဟုတ်အခြားလှုပ်ရှားမှုများရပ်ရန်လိုအပ်ခြင်းသည်သင်၏လေ့လာမှု၏စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးသို့မဟုတ်သာယာသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတွင်သင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဒီနည်းနဲ့နောက်မှလေ့လာရန်ဆုံးဖြတ်သောအခါစတင်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူလိမ့်မည်။
သိသာထင်ရှားတဲ့ဒီသင်၏လေ့လာမှုအတွက်အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ သင့်တွင်တီဗွီ၊ တယ်လီဖုန်း၊ ကွန်ပျူတာ၊ မဂ္ဂဇင်းများစသဖြင့်ရှိသည်။ သင်၏အနားတွင်သင်စာအုပ်များကိုဘေးဖယ်ထားရန်သွေးဆောင်မှုကိုအလွယ်တကူလုပ်နိုင်သည်။
မှန်ကန်တဲ့စိတ်ကိုအောင်မြင်ဖို့ ၅ မိနစ်လောက်အချိန်ယူလေ့လာပါ။ မည်သည့်ဂီတအမျိုးအစားကိုမဆိုပိတ်ထားပါ၊ ထိုင်ပါ၊ သင့်စိတ်ကိုသန့်ရှင်းစွာရှူရှိုက်ပါ။ သင့်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသောသို့မဟုတ်အချို့သောအမြင်အာရုံချို့တဲ့ခြင်းနှင့်သင်၏အနာဂတ်အောင်မြင်မှုများကိုတွေးတောဆင်ခြင်သောစကားစုကိုပြန်လုပ်ပါ။ သင်ကိုယ်တိုင်ပျော်ရွှင်သောလေ့လာမှုကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။
ပတ် ၀ န်းကျင်သည်သင့်အားလေ့လာရန်လှုံ့ဆော်ရာတွင်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်နိုင်သည်။ သင်သည်တေးဂီတပါသည့်တောက်ပသော၊ ပူနေသောအခန်းတွင်လေ့လာနေသည်ဟုစိတ်ကူးကြည့်ပါ။ သို့မဟုတ်မှန်ကန်သောအပူချိန်နှင့်လေဝင်လေထွက်ကောင်းသည့်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သောအခန်းတွင်ဖြစ်သည်။ ဘယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကလေ့လာချင်စိတ်ရှိလာအောင်လုပ်မလဲ။
ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သည်သင့်အားလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေပါလိမ့်မည်။ အောင်မြင်မှု၏စိတ်ကျေနပ်မှု၏အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းကောင်းတစ် ဦး ယုံကြည်မှုတိုးမြှင့်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကောင်းလုပ်ထားတဲ့အလုပ်အတွက်သင့်ကိုချက်ချင်းဆုချပါ။ ရေခဲမုန့်တစ်ခွက်ခံစားခြင်း၊ သင်အကြိုက်ဆုံးတီဗီရှိုးကိုကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်သူငယ်ချင်းများကိုစကားပြောဆိုခြင်းစသည်တို့ကဲ့သို့သောအရေးကြီးသည့်အရာတစ်ခုခုဖြစ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အရေးကြီးတဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုရတဲ့အခါကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကြီးအကျယ်ဆုချပါ။
၁၀) သင့်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးမည့်စကားစုများ -
“ လူငယ်များသည်ပညာကိုလေ့လာရန်အချိန်ဖြစ်သည်။ အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်း၊
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » ကိုယ်ပိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု » ပညာရေး » ခက်ခဲလေ့လာရန်လှုံ့ဆော်မှု - ၉ ချက်
79 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
andres karel ဟုသူကပြောသည်
andrés karel သို့ပြန်သွားရန်
Merediht Solano White က ဟုသူကပြောသည်
Merediht Solano Blanco အားစာပြန်ပါ
Jairo montoya ဟုသူကပြောသည်
Jairo Montoya အားစာပြန်ပါ
မာရီယာ perez ဟုသူကပြောသည်
Maria Perez အားပြန်ပြောပါ
Johann Dach Delgado ဟုသူကပြောသည်
Johann Dach Delgado သို့ပြန်သွားပါ
ခွင့်ပြုပါ၊ စာမေးပွဲတွင်အမြဲတမ်းလေ့လာနေသည့်ပြhaveနာတစ်ခုရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်သည် ၂ ကြိမ်ထက်မကဖတ်သော်လည်းကျွန်ုပ်နားမလည်ပါ။ စာမေးပွဲတွင်စာမေးပွဲတွင်ပုံမှန်အဆင့်ရပါသည်။ ပက်ထရိ
ဒါဝင် Javier Gómez Quito ဟုသူကပြောသည်
ငါးမိနစ်လောက်သွားပြီး Tip တစ်ခုချင်းစီကိုလိုက်လုပ်ပါ။ အမှိုက်သုံးလုံးကသင့် ဦး နှောက်ထဲကအမှိုက်တွေအားလုံးကိုထုတ်ပစ်ပါ။ ခွက်ကိုရှင်းလင်းလိုက်ပါ။ သင်၏ဘဝ၊ ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်အထူးသဖြင့်သင့်စိတ်ကိုဖယ်ရှားပါ။
Darwin Javier Gómez Quito အားပြန်ပြောပါ
David Santos Carrasco Mena ဟုသူကပြောသည်
David Santos Carrasco Mena အားပြန်ပြောပါ
အိုး! ငါမရှိခြင်းလွဲချော် သတိပေးချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Laura Ricardez အားစာပြန်ပါ
Andres Mendoza ၊ ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာသည်တွန်းအားပေးမှုနှင့်အနည်းငယ်ဆက်စပ်မှုရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်စိတ်ဝင်စားမှုအလွန်လေ့လာခြင်းနှင့်စာဖတ်ခြင်းတွင်အလွန်ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ခဲ့ဖူးသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်သည်တက္ကသိုလ်သို့ ၀ င်ပြီးသည်နှင့်တစ်စုံတစ်ခုကိုဖတ်ရန်ကြိုးစားသည့်အခါအလွန်စိတ်ဖိစီးလာသည်။ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ဓာတ်ခွဲခန်းအလေ့အကျင့်အတွက်စာအုပ်၏အခန်း ၆ ခန်းကိုဖတ်ရသည်။ စာဖတ်သူနှစ် ဦး ဖတ်နိုင်လောက်အောင်ခဲယဉ်းသော်လည်းငါဖတ်ရှုရမည့်အရာအားလုံးကိုသိခြင်း၏ရိုးရှင်းသည့်အချက်ကကျွန်ုပ်ကိုပျင်းရိစေပြီးကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ဖြစ်ရန်မလိုသောကြောင့်အလွန်အမင်းခက်ခဲသောကြောင့်ကြိုတင်များစွာကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Andres Mendoza အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါအန်ဒရေ၊ ပြproblemနာသည်အစတွင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာပျင်းရိခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည်။ သငျသညျငါးမိနစ်အုပ်ချုပ်မှုကိုကြိုးစားနိုင်ပါတယ်။ သင်လေ့လာရန်သွားသောအခါ၊ ပထမ ၅ မိနစ်ကိုသင်အာရုံစူးစိုက်ရန်နှင့်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်မည်ဟုအဆိုပြုပါ။ ငါးမိနစ်ကြာပြီးတဲ့နောက်သင့် ဦး နှောက်ဟာအရည်များတယ်၊ သင်ဆက်လက်လုပ်ချင်တာကိုတွေ့လိမ့်မယ်။
Zuir hakiz ဟုသူကပြောသည်
arigatou, watashi နှင့် koibito
Zuir Hakiz သို့ပြန်သွားပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဆgrade္ဌမတန်းတွင်ရှိပါသည်၊ ကျွန်ုပ်၏အရည်အချင်းများမှာအလွန်ကောင်းသော်လည်းစာဖတ်ခြင်းတွင်ကျွန်ုပ်အားအဘယ်အရာဆုံးရှုံးနိမ့်ပါသနည်း။
မင်္ဂလာပါ Paula၊ မင်းကိုငါသိပ်နားမလည်ဘူး စာကောင်းကောင်းရေးတတ်အောင်သင်လိုပါသလား?
မင်္ဂလာပါ။ ဤအရာကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးသင့်အားမေးခွန်းများစွာမေးရန်အခွင့်အရေးယူသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အမှန်တရားမှာကျွန်ုပ်သည်မကြာမီကကျွန်ုပ်၏သမီးများ၏လေ့လာမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်အမင်းလွှမ်းမိုးခြင်းခံရသည်။ အသက် ၁၅ နှစ်ကျော်သည် ESO ၏ ၄ နှစ်တွင်ဖြစ်သည်။ တောက်ပသောကောင်မလေးမဟုတ်သော်လည်းကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့်အလုပ်အပေါ် အခြေခံ၍ အမြဲတမ်းအဆင့်အတန်းများများရခဲ့သော်လည်းဤသင်တန်းသည်သူ၏ဘ ၀ ၏ပထမ ဦး ဆုံးရှုံးနိမ့်မှုများကိုသင်္ချာနှင့်ရူပဗေဒ၌ယူဆောင်လာသည်။ အဆိုးဆုံးကတော့သူမသိဘူးလို့ပြောခြင်းကိုရပ်တန့်ခြင်းကဘယ်သူမှအလုပ်မရှိရင်လေ့လာခြင်းဆိုတာဘာလဲ။ ၁၂ နှစ်၏ပျမ်းမျှ ESO လေ့လာမှုသည်ထူးခြားပြီးထူးချွန်သောမိန်းကလေးတစ် ဦး ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်ထူးခြားသောအတွေးအခေါ်များဖြစ်သည့်အတွက်ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဥာဏ်ရည်ရှိခြင်းသည်သူမအတွက်ခက်ခဲသည်။ ဒီနေ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေကိုသူမနှင့်အတူပြန်လည်သုံးသပ်ရန်မလိုဘဲတိုက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်သောစပိန်နိုင်ငံကိုကမ္ဘာ့မြေပုံပေါ်တွင်နေရာချထားရန်သူမကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ စနစ်လား? သူ့အသက်ကငါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်နိုင်ငံရေးမြေပုံရေးဆွဲရန်ငြီးငွေ့ခဲ့သည်!
မင်္ဂလာပါမေကာ၊ မင်း ၁၅ နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးအတွက်တော့သူမရဲ့အဆင့်အတန်းကအနည်းငယ်ကျဆင်းသွားနိုင်တဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့အသက်အရွယ်မှာရှိနေတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျရှုံးမှုနှစ်ခုအတွက်သင်စိတ်ပူစရာမလိုဘူးလို့စိုးရိမ်တယ်။ စင်ကြယ်သောအက္ခရာများရှိသည့်လူများရှိသည်။ သင်္ချာနှင့်ရူပဗေဒသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုနားမလည်ပုံရသည်
မင်းသမီးကသူမသံသယများကိုဖြေရှင်းရန်သို့မဟုတ်သင်္ချာကိုပိုမိုနားလည်စေရန်ဗီဒီယိုများရှာဖွေရန်သင့်သမီးကို YouTube သုံးရန်အကြံပေးလိုသည်။ သင်္ချာသင်ကြားရန်သင်ကြားသောလမ်းကြောင်းနှစ်ခုရှိသည်။
ဤလမ်းကြောင်းများ၌အခက်အခဲများစွာရှိသည့်ပြproblemsနာများရှိသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ သင်နှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းများရှိသောပြproblemနာတစ်ခုသို့မဟုတ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုရှာဖွေရန် youtube search bar ကိုသုံးနိုင်သည်။
မင်းရဲ့ဒုတိယသမီးအကြောင်းကိုမင်းပြောတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ... ငါဒီဘလော့ဂ်မှာပညာရေးစနစ်ကိုအကြိမ်ကြိမ်ဝေဖန်ခဲ့တယ်။ ၎င်းသည်အလွတ်ကျက်မှတ်ခြင်းအပေါ်အခြေခံသည်။ ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကျိုးစီးပွားနှင့်လက်တွေ့ဘ ၀ မှအလွန်ဝေးကွာသောအရာများကိုများစွာသင်ယူသည်။ အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသောလေ့လာသင်ယူမှုအနည်းငယ်သာရှိသဖြင့်သင်ယူရရှိသောအယူအဆများသည်မှတ်ဉာဏ်တွင်အနည်းငယ်မျှသာရှိသည်။
မင်းရဲ့ပထမသမီးကိုထပ်တူထပ်မျှအကြံပေးချင်ပါတယ် YouTube ကို didactic ဖြည့်စွက်အနေနဲ့အသုံးပြုတာပါ။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်သည်အပိုမက်လုံးတစ်ခုရှာတွေ့နိုင်ပြီး၎င်းသည်ယနေ့ကလေးများနှင့်ပိုမိုနီးကပ်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
မင်းရဲ့အဖြေနဲ့အကြံပေးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ စကားမစပ်နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကိုပေးလိုက်တယ်။ သူမရဲ့နေ့ကစင်ကြယ်သောအက္ခရာများဖြစ်ခဲ့ပြီးသင်္ချာသို့မဟုတ်ရူပဗေဒပညာသည်နားမလည်နိုင်သော်လည်းသူကဇီဝဗေဒကိုနှစ်သက်ပြီးဇီဝကမ္မကုထုံးကိုလေ့လာချင်သည်။ သူ့ခေတ်တွင်သူကသိပ္ပံပညာကိုယူလျှင်ထို ၀ န်ထုပ်ပိုးကိုအမြဲတမ်းထမ်းဆောင်လိမ့်မည်၊ သို့သော်သူကြိုက်သည့်အရာအတွက်သူတိုက်ပွဲဝင်လိမ့်မည်ဟုသူ၏အကြံပေးချက်ကိုငါပြီးသားပြောခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ယခုတွင်အထက်တန်းကျောင်းရှိလူသားချင်းစာနာမှုဌာနခွဲကိုရွေးချယ်ရန်စဉ်းစားနေပြီဖြစ်သည်။ မင်းထင်မြင်ချက်အရ၊ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ငါသည်အထက်တန်းကျောင်းကိုပြု။ သင်ပြီးဆုံးသောအခါသင်တစ် ဦး သတ်သတ်မှတ်မှတ်ပြင်ဆင်မှုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးထင်ပါတယ်။ ကြိုးစားအားထုတ်သော်လည်း, တောက်ပသောကျောင်းသားဖြစ်ခြင်းနှင့်ဤမျှလိမ္မာပါးနပ်ဖြစ်ခြင်း, သူမ၏လုပ်ဖို့ကပိုကောင်းလိမ့်မည်မဟုတ် သူမကြိုက်သောအရာနှင့်ဆက်စပ်သောလေ့ကျင့်ရေးသံသရာ? ကျေးဇူးထပ်တင်ပါရစေ။
သင် Mayca မေးသောခက်ခဲမေးခွန်း။ ငါကငါတို့ကြိုက်တာကိုလုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ထင်တဲ့လူတွေထဲကတစ်ယောက်ပါ။ ဇီဝဗေဒကိုသင်စမ်းကြည့်နိုင်ပါသည်။ သင်၏လေ့လာမှုမှာအခက်အခဲများကြောင့်သင်၏အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှုပျက်ပြားသွားပါက၊
မင်းမြင်တဲ့အတိုင်းငါမင်းအတွက်အများကြီးမဖြေရှင်းနိုင်သေးဘူး၊ ဒါကခက်ခဲတဲ့မေးခွန်းပဲ။ ကျွန်ုပ်ကလေးများအားသူတို့လိုချင်သမျှကိုမိမိတို့ကိုယ်ကိုအပ်နှံရန်အခွင့်အလမ်းပေးမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
Ionut Ras ဟုသူကပြောသည်
Ionut Ras အားပြန်ကြားပါ
အဲလစ်ဇဘက် Farro Rojas ဟုသူကပြောသည်
ဒီဗီဒီယိုကကျွန်ုပ်ရရှိနိုင်တဲ့အရာတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်အောင်ကူညီပေးခဲ့တယ်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ် !!!!! 😀
Far လိရှဗက်ဖာရို Rojas အားပြန်ပြောပါ
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ကျွန်တော်လေ့လာနေတာပါ။ ကျွန်ုပ်သည်4ESO ပြီးဆုံးသွားပြီးကျွန်ုပ်ထွက်ခွာခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးလက်ထောက်၏အတိုက်အခံဖြစ်ရန် ဦး ဆောင်ခဲ့သည့်အထက်တန်းကျောင်းကိုတက်တော့မည်မဟုတ်ပါ၊ UNI ထဲဝင်ရန်ရိုးရိုးလေးပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏သင်ကြားရေးအသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းအတွက်ကျွန်ုပ်မနက်ဖြန်လုပ်လိုသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အထူးနှစ်သက်သောသင်္ချာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်နာရီများစွာအကုန်လေ့လာပြီးကတည်းကကျွန်ုပ်သည်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်နေမည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်အားကုန်ကျမည်ဟုပင်ထင်သော်လည်း၎င်းဗီဒီယိုကိုကြည့်ခြင်းကကျွန်ုပ်ကိုအထောက်အကူပြုသည်။ ငါအဖြေမျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်စကားနှင့်ကြိုဆိုပါတယ်😀 Ah! ထိုအခါငါကသာ 19 နှစ်ပဲ။
အမှန်တရားကတော့သင်္ချာကိုဘာမှထက်ပိုပြီးလေ့လာတာကငါ့ကိုနည်းနည်းကုန်ကျတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကိုငါနားမလည်နိုင်ဘူး၊ သူတို့မှာဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ဂုဏ်သတ္တိများအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာငါသိတယ်၊ ငါစိတ်ပျက်သွားတယ်၊ လေ့လာဖို့ငါမလွယ်ဘူး ... အကြံဥာဏ်တစ်ခုခုလား။
သင်္ချာဟာငါ့ရဲ့အားနည်းချက်ပဲ။ ငါခက်တယ်ဆိုတာငါသိတယ်၊ ဒါပေမဲ့မင်းတို့ကသူတို့ကိုရယ်စရာကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရှာဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ကော။ ၎င်းသည်မိမိကိုယ်ကိုလှည့်စားခြင်းဟုထင်ရသော်လည်း၎င်းသည်အလုပ်ဖြစ်ပါသည်။ 😉သဘောထားသည်အရေးအကြီးဆုံးသောအရာဖြစ်ပြီးသင်စတင်လေ့လာခြင်းမပြုမီစိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်းသို့မဟုတ်အပျက်သဘောခံစားရလျှင်၎င်းစိတ်လှုပ်ရှားမှုများသည်သင်၏သင်ယူမှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်အလွတ်ကျက်ရန်အဘယ်အရာကိုကူညီပေးသည်ကိုကြည့်ဖို့ကြိုးစားပါ။ ခင်ဗျားဟာအမြင်အာရုံလား၊ ဆိုလိုတာကအရာတွေကိုစာဖြင့်ရေးသားရန်လိုသလား။ အရောင်များ၊ သင်္ကေတများသုံးပြီးအကျဉ်းချုပ်လုပ်ပါ။ သို့မဟုတ်တူညီသောလေ့ကျင့်ခန်းများကိုထပ်ခါထပ်ခါပြုလုပ်ရန်လိုကောင်းလိုပါမည်လား။ သို့မဟုတ်အခြေအနေကိုသင်အမှန်တကယ်ကဲ့သို့မှတ်ယူခြင်းက ပို၍ ကောင်းပါသလော။ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုလား။
အကယ်၍ သင်သည်တစ်ယောက်ယောက်အားသင့်အားပုဂ္ဂလိကသင်ခန်းစာများပေးရန်တောင်းဆိုနိုင်ပါက ပို၍ ကောင်းသည်။ ဒါပေမယ့်နင့်ကိုတကယ်ကူညီမယ့်သူကိုရှာကြည့်ပါ။ နူးရူလိုနင့်လိုမှတ်ချက်တွေကမင်းကိုပိုဆိုးစေမယ့်သူမဟုတ်ဘူး။
သင်ယူရတာဟာပျော်စရာကောင်းတယ်၊ ငါ့ကိုယုံကြည်တယ်။ အရေးကြီးဆုံးကတော့သင်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးသောနည်းလမ်းရှာရန်ဖြစ်သည်။
ငါ ... အလွယ်တကူအာရုံပျံ့လွင့်သွားလို့၊ တစ်ခါတလေငါစာသင်ခန်းတွေကိုပြန်လည်လေ့လာနေပေမယ့်ရုတ်တရက်ငါတခြားအကြောင်းတစ်ခုခုကိုစစဉ်းစားမိတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်လက်တော့ပ်ပေါ်အာရုံလွဲသွားတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါဟာသင်္ချာနဲ့သိပ္ပံပညာကိုကြိုက်တယ်၊ ငါဟာ ၇ တန်းကျောင်းသားဖြစ်ပြီး၊ ဒီနှစ်အထိငါကျောင်းထွက်လိုက်တယ်။ ဒီဟာကငါ့ရဲ့လှုံ့ဆော်မှုနဲ့အိပ်မက်တွေလုံးလုံးပျောက်ဆုံးသွားတယ်၊ ငါ့အဖေနဲ့အစ်မတွေကလိုချင်တဲ့အတွက်ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး ကျောင်းကိုသွားခိုင်းတာငါ့ကိုအရမ်းစိတ်ပျက်စေတယ်၊ ​​ငါအလွယ်တကူဒေါသထွက်ပြီးစိတ်ဓာတ်ကျတယ်
အကယ်၍ ၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးသောအရာတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းသင်ဘာလုပ်ရန်အကြံပေးပါသနည်း၊ ကျွန်ုပ်အဆင့်သည်ဘာသာစကား၊ လူမှုရေးနှင့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာတို့အလွန်ဆိုးရွားသည်၊ လူမှုရေးတွင်ပိုမိုပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဟိုင်းနေကောင်းလား? ငါဒီဆောင်းပါးကိုကြည့်ပြီးအရမ်းကြီးတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါ့ရဲ့သံသယတွေကတော့ကျန်နေသေးတယ်။ ငါလေ့လာဖို့သင်ပြောမယ်။ အစားအစာ၌ကျွန်ုပ်သည်လက်ခံပြီး ဖြစ်၍ ပထမနှစ်နှစ်တွင်ကြွေးတင်သင့်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်အဖို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်ခဲယဉ်းသည်။ ယခုသူတို့ကိုစွန့်လွှတ်ရန်ကြိုးစားသည်။ သို့သော်ဆက်လက်လေ့လာခြင်းကိုရပ်တန့်သွားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်စိတ်ပျက်အားလျော့သွားသည်ဟုခံစားမိကြသည်။ တကယ်လို့ငါ့အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းအလုပ်ကိုငါကြိုက်တယ်၊ ငါ rhythm နဲ့ paaa ပျံသန်းချိန်ပျောက်သွားတယ်။ ငါ့မှာနောက်ဆုံး ၃၄ ယောက်သွားခွင့်ရတယ်၊ ငါဒီစိတ်ဓာတ်ကျဆင်းမှုကိုဆက်ပြီးလုပ်နေတယ်။ နုတ်ထွက်ဖို့အချိန်ရောက်လာပြီလား။ ငါအစွန်အဖျားတန်ဖိုးထားလိမ့်မယ်။ Regards!
anah tomlinson ဟုသူကပြောသည်
ဟိုင်းငါ Anahi Tomlinson၊ ငါအထက်တန်းကျောင်း ၂ က။ အကူအညီလိုတယ်။ တကယ်တော့သူတို့ကငါ့ကိုတစ်စုံတစ်ခုမေးတယ်၊ အမှန်တရားကတော့ငါဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိဘူး
anahi tomlinson အားပြန်ကြားပါ
Edith rodriguez ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်လှုံ့ဆော်မှုကိုရှာဖွေနေသည်၊ အမှန်တရားမှာမကြာသေးမီကကျွန်ုပ်သည်လေ့လာလိုစိတ်ပျောက်လွင့်သွားပြီး၊ ကျွန်ုပ်ကိုစိတ် ၀ င်စားစရာမရှိသကဲ့သို့အတန်းများစွာကိုလွဲချော်သွားသည်။ ကျွန်ုပ်ဗီဒီယိုကြည့်လိုသည်။ သို့သော်မတည်ရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်သည် မြင်ချင်ပါတယ်၊ အခုငါအများကြီးကူညီပေးတဲ့မှတ်ချက်တွေကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါကျေးဇူးတင်ပါတယ်
edith rodriguez သို့ပြန်သွားရန်
ဟယ်လို။ ငါအကူအညီလိုတယ် .. : (။ ။ ငါ ၁၃ နှစ်ရှိပြီ။ ၂ လေ့လာနေတယ်။ ဒါကအမြဲတမ်းအဆင့်အတန်းကောင်းကောင်းရတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှအရမ်းစိတ်ဖိစီးလာတယ်။ ငါမှာလှုံ့ဆော်မှုမရှိဘူး၊ တစ်ခါတစ်ရံမှာ။ ငါထင်တာသူတို့ကငါ့ဆီလာလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ စာမေးပွဲတွေကမကောင်းဘူး၊ မထိုက်တန်ဘူး၊ ငါဟာအဆင့်အတန်းပိုကောင်းတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ရဲစွမ်းသတ္တိ။ မင်းရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိခိုက်စေတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်ကိုခံနိုင်မှာသေချာတယ်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့မင်းကအကောင်းမြင်ဖို့ကြိုးစားတယ်၊ မင်းမှားသွားလိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူး၊ လှုံ့ဆျောမှု recover လိမ့်မယ်။
အန်တိုနီယို ^^ ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်ကျမလားမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော့်လေ့လာမှုမှာအကူအညီလိုတယ်။ ကျမစိတ်ဓာတ်ကျတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါကအာရုံစူးစိုက်မထားဘူး။ ငါမိဘတွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုကူညီပြီးစီမံကိန်းတွေကိုသွားဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးပြီ။ ဒါပေမယ့် မစွမ်းနိုင်ဘူး၊ မင်းငါ့ကိုကူညီဖို့ကြင်နာပါ့မလား
အန်တိုနီယို, ၁၃ နှစ်၊ ထပ်ခါတလဲလဲသင်တန်းများ၊ ဒုတိယ ESO ။
Antonio ^^ သို့ပြန်ကြားပါ
ဆောင်းပါးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမသွန်သင်သူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးစေ့ဆော်မှုများကိုအစဉ်မပြတ်ရှာဖွေနေသည်။ သင်၏ဆောင်းပါးသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောလေ့လာမှုပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးရန်အရေးကြီးသောဆုံးဖြတ်ချက်များကိုချရန်ကျွန်ုပ်အားကူညီပေးခဲ့သည်။ ပွေ့ဖက်!
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် ၁၂ နှစ်ရှိပါပြီ။ hyperactivity ရှိ၍၊ လေ့လာခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်ကြောက်စရာကောင်းသည်ဟုပြောရပါမည်။ ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်သောကျွန်ုပ်၏အကြီးမားဆုံးပြproblemsနာများမှာလေ့လာခြင်းမပြုမီကျွန်ုပ်သည်သူငယ်ချင်းများနှင့်အပန်းဖြေရန်ဂိမ်းတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုခုသုံးနိုင်သည်ဟုထင်သည်၊ သို့သော်ထို့နောက်အချိန်သည်ပျံသန်းလာပြီးလေ့လာရန်အချိန်မရှိပါ။ ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ?
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာမှာယခုနှစ်ကျွန်ုပ်တက္ကသိုလ်တက်ပြီးရှေးဟောင်းသုတေသနဘွဲ့ဖြစ်သောကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သောအသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းအလုပ်ကိုလေ့လာနေခြင်းဖြစ်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်စိတ်ကူးယဉ်ပြီးဖျော်ဖြေခြင်းမခံရဟုကြာမြင့်စွာကတည်းကခံစားခဲ့ရ စတင်လေ့လာခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်သည်မိဘများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်အားလေ့လာရန်အတွက်များစွာကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကြောင့်အပြစ်ရှိကြောင်းခံစားမိပြီး၊ ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်စာမသင်ဘဲကောင်းမွန်စွာမလုပ်ဆောင်နိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်သူတို့ကိုစိတ်ပျက်စေလိမ့်မည်ဟုခံစားမိပြီးမြင့်မားသောအမှတ်များကိုမရရှိလျှင်ဖိအားလည်းရှိနေသည်။ ကျနော်တို့ပညာသင်ဆုချီးမြှင့်သို့မဟုတ် Conicet ရိုက်ထည့်ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
ငါဟာအမြဲတမ်းလေ့လာဖို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာဝန်ခံပေမဲ့ငါ့ရဲ့မိဘတွေရဲ့ထောက်ပံ့မှုမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါစိတ်ပျက်သွားတယ်။ ငါအလုပ်ရခဲ့တယ်။ အဲဒီမှာငါပိုက်ဆံ (စျေးဝယ်ခြင်း၊ လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ရုပ်ရှင်၊ အစာကောင်းစားခြင်း၊ အပန်းဖြေခရီးထွက်ခြင်းစသည်ဖြင့်) စပြီးကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့တာပါပဲ။ ဒါကပစ္စုပ္ပန်မှာကျွန်မကိုပျော်ရွှင်စေတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ အ ၀ တ်အစားများ ၀ တ်နေပြီ၊ သူငယ်ချင်းများထွက်သွားကြပြီ။ လမ်းလျှောက်သူများကငါ့ကိုငြီးငွေ့နေကြသည်။ အကြာတွင်ကျွန်ုပ်သည် ၇ နှစ်ကျောင်းပြီးသောအခါကျွန်ုပ်မွေးဖွားခဲ့သောဌာနသို့ခရီးထွက်ခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်ကျောင်းမြှင့်တင်ရေးအများစုသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်ကြောင်းသိခဲ့ရသည် သူတို့ကသူ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၊ အရေးကြီးတဲ့ရာထူးတွေ၊ ။ ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများလိုက်လျှောက်သောလမ်းအတိုင်းလျှောက်ရမည်ကိုသဘောပေါက်ခဲ့သည် ကျွန်ုပ်၏ဘဝကိုဖြုန်းတီးခြင်း၊ ယခုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်အလွန်လေးလံသောကြောင့်ယခုကျွန်ုပ်အလွန်ဝမ်းနည်းနေပါသည်၊ ကျွန်ုပ်ပြုလုပ်သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားထုတ်မှုကြောင့်နာကျင်မှုခံစားရပါတယ်။ မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်စတင်လေ့လာခဲ့သည်၊ သို့သော်မကောင်းသောဆုံးဖြတ်ချက်များအားစဉ်းစားတွေးတော။ စိတ်ဖိစီးသောအခါစိတ်လှုပ်ရှားမှုကင်းမဲ့ပါသည်။ ငါ့မှာရှိခဲ့။ ငါကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဟောင်းကျောင်းသားဖြစ်ခြင်းကိုညှင်းဆဲခြင်းနှင့်အသက် ၁၇ နှစ်မှ ၁၈ နှစ်အရွယ်ရှိငယ်ရွယ်သောမိန်းကလေးငယ်များ၊ ကျွန်ုပ်၏အတန်းဖော်များ၊ သူတို့၏အသက်အရွယ်တွင်အလွန်အသင့်ရှိကြသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်စိတ်ပျက်အားလျော့နေပြီးသူတို့ကိုယ်တိုင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်သောအခါကျွန်ုပ်သည်မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုလျော့နည်းသွားသည်။
ငါရှေ့ဆက်နိုင်, တစ်စုံတစ် ဦး ဖြစ်နှင့်အတိတ်အရာအားလုံးထားခဲ့ပါနိုင်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်, ငါရှေ့ဆက်နိုင်စေဖို့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုနှင့်အတူခိုင်မာသောလှုံ့ဆျောမှုလိုအပျ ... ငါအလွန်ကောင်းစွာလုပ်နေတယ်ဘုရားသခင်အားဆုတောင်း။ ငါကအောင်မြင်ဖို့လိုတယ်ငါကျိန်ဆိုမယ်လို့ငါကျိန်ဆို !!! ... .. အလုပ်မှပင်ပန်းအတန်းကိုရောက်ရှိမီ ... ငါအောင်မြင်ရန်လိမ့်မည်ကျိန်ဆို TT
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်အလားတူခံစားခဲ့ရသော်လည်းအတားအဆီးများကြားမှ၎င်းကိုကျွန်ုပ်ကိုင်တွယ်နိုင်ခဲ့သည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်မတတ်နိုင်ဟုပြောသောအခါတိုင်းကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုတတ်နိုင်ရန်လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်။ ထို့အပြင်အတိတ်ကဆုံးဖြတ်ချက်များသည်သင်မလိုချင်သောအရာကိုသိရန်ပင်အစဉ်အမြဲလုပ်ဆောင်ပေးသည်။ ဒါကြောင့်သင်သေချာဘို့တတ်နိုင်သမျှအားပေးပါတယ် !!
Vanessa de la Cruz ဟုသူကပြောသည်
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၊ သင်သည်ထိုလူငယ်ကျောင်းသားအုပ်စုအတွင်း၌အကောင်းဆုံးသောလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာတွေကမင်းကိုပြောလိမ့်မယ်၊ ကယ်လီဟာအထက်တန်းကျောင်းမှာသူလေ့လာခဲ့တဲ့အရာတွေကိုမှတ်မိတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူး၊ ခွန်အားလည်းမရှိတော့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်သူကဒီမှာအိပ်မက်တစ်ခုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတယ် အဲဒါကငါ့ကိုတကယ်လှုံ့ဆော်ပေးတယ်။
ကျွန်ုပ်သည် ၂၁ နှစ်ရှိပါပြီ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကယ်လီ။ ငါဒီမှာလှုံ့ဆော်မှုကိုရှာဖွေနေလာ။ , သင်၏မှတ်ချက်ဆောင်းပါးသူ့ဟာသူထက်ငါ့ကိုပိုမိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ သင်လိုချင်သောအရာအတွက်ကြိုးစားတိုက်လှန်ပါက၎င်းကိုသင်ရရှိသောအခါသင်သည်ပျော်ရွှင်မှုကိုနှစ်ကြိမ်ခံစားစေလိမ့်မည်။
Vanessa De la Cruz အားပြန်ပြောပါ
ပုရွက်ဆိတ်တစ် ဦး ကိုပုရွက်ဆိတ်တစ်ကောင်ကိုသတ်ခြင်းထက်anရာမဘုန်းကြီးကိုသတ်ခြင်းထက်သာလွန်သောဘုန်းအသရေရှိသည်။
မိမိကိုယ်ကိုတိုးတက်စေရန်အခြားသူများနှင့်မိမိကိုယ်ကိုမနှိုင်းယှဉ်သင့်ပါ။ သို့မှသာမိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုကိုလျှော့ချခြင်းမရှိဘဲအတားအဆီးများကိုကျော်လွှားနိုင်လိမ့်မည်။ အသက်သည်အရေးမပါ၊ အဘယ်အရာကိုမျှရေးသားထားသည် ... ပညာသင်ယူနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အောင်မြင်သောသူမပျော်ရွှင်ဖြစ်အာမခံချက်မ, နေသည်နေရောင်ခြည်အောက်ရှိဝါဂွမ်းကိုရိတ်သိမ်းသူမပျော်ရွှင်မှုကိုအာမခံသည်။
သင်ရှေ့ဆက်ရလိမ့်မည်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅ နှစ်ကကျောင်းပြီးပြီးတဲ့နောက်ငါထပ်တူခံစားခဲ့ရတယ်။ အခုငါလေ့လာနေပြီးကလေးနှစ်ယောက်ရတယ်။ သူတို့ထဲကတစ်ယောက်က ဦး နှောက်မသန်မစွမ်းဖြစ်နေတယ်။ အခက်အခဲများစွာနဲ့လေ့လာတယ်။ ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်နဲ့အတူငါရှေ့ဆက်သွားမယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသိတယ် ငါတို့ကိုခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံစေတော်မူလိမ့်မည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၁၈ နှစ်ရှိပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်ဒုတိယ Bach တွင်ပါ ၀ င်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အမြဲတမ်းကောင်းသောအဆင့်ကိုအမြဲရရှိနေပြီး၊ ဤသင်တန်းကိုစတက်ချိန် မှစ၍၊ ကျွန်ုပ်၏နွေရာသီသည်စက်တင်ဘာလအတွက်ဘာသာရပ် ၄ ခု (သင်္ချာ၊ အစောပိုင်းကကျွန်ုပ်လေ့လာခဲ့သည့်သင်တန်းများတွင်လှုံ့ဆော်မှုဖြင့်လေ့လာခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အာရုံစူးစိုက်မှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်မသိရှိမှီတိုင်အောင်မရပ်တန့်ခဲ့ပါ။ သို့သော်ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်လှုံ့ဆော်မှုမရှိသောကြောင့်တစ်ဝက်ပင်မသုံးစွဲနိုင်ပါ။ တစ်နာရီသာအာရုံစူးစိုက်ပြီး .. ငါလေ့လာသင့်သည်ဟုထင်သော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုအကျိုးပြုနိုင်သောကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အရေးကြီးသောအရာများဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်မလေ့လာပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်အကူအညီလိုအပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ယခင်ကဲ့သို့တူညီသောစိတ်အားတက်ကြွမှုနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုရှိလိုပါသည်။ ကြိုပြီးကျေးဇူးပါပဲ။
၎င်းကိုအောင်မြင်ရန်ပန်းတိုင်ငယ်များချမှတ်ပါ။ သင်ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်၌တစ်ခါမျှမဖြစ်ခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် ၃ နှစ်ကြာပြီးနောက်ကျွန်ုပ်ကျောင်းမှထွက်သွားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်ပြန်လည်လည်ပတ်လိုသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်အသက်ကြီးသောကြောင့်ပျမ်းမျှအားဖြင့်ဖွင့်ထားသည့်ကျောင်းတွင်ပြီးဆုံးသွားသည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်မမှာပန်းတိုင်မရှိတဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခု၊ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်နည်းပါးခြင်းကြောင့်ပဲ။ ငါဘာအလုပ်အကိုင်လဲမသိသေးဘူး၊ ငါပြည်ပကိုသွားပြီးလေ့လာချင်တယ်ဆိုတာသိပေမယ့်ကုန်ကျစရိတ်တွေများတယ်၊ ဒါကိုရဖို့အတွက်ပညာသင်ဆုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပျှမ်းမျှကိုထိန်းသိမ်းထားရမယ်၊ ရည်မှန်းချက်ငယ်လေးတွေထားရမယ်၊ မနက်ဖြန်ကလေးတွေကိုစဉ်းစားရမယ်၊ အခြေအနေအချို့မှာသင်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာကိုအလေးအနက်စဉ်းစားသင့်တယ်၊ ဘဝကိုအာရုံစိုက်တဲ့ဂိမ်းလိုပဲ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ၊ သင့်ကိုတကယ်ရွှင်လန်းစေမယ့် yukoi kenji ပို့ချချက်တွေကိုနားထောင်ဖို့အကြံပေးလိုပါတယ်။ လူတိုင်း ၁၇ နှစ်အရွယ်မှာအထက်တန်းကျောင်းကိုတက်နိုင်ပေမယ့်အဲဒီမှာခြားနားချက်ကရင့်ကျက်မှု၊ အာရုံစူးစိုက်မှု၊ စိတ်အားထက်သန်မှု၊ ပန်းတိုင်များစွာ
ရွေးချယ်မှုစာမေးပွဲမျိုးစုံနဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့ရွေးချယ်မှုအမျိုးမျိုးကိုလေ့လာဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။ ငါ AGE အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်ပြည်တွင်းရေးရာထူးတိုးမြှင့်ရေးကိုပြင်ဆင်နေသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းစာမသင်ခဲ့၊ ကျွန်ုပ်သည်ရစ်သမ်၊ စာမေးပွဲသည်ဇန်နဝါရီလကုန်အထိသို့မဟုတ်ဖေဖော်ဝါရီလအထိဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်သည်အချိန်မီရှိနေသေးသော်လည်းကျွန်ုပ်တွင်လှုံ့ဆော်မှုကင်းမဲ့ပြီးအားလုံးအထက်တွင်ရှိသည်။ မည်သည့်နေရာတွင်စရမည်၊
ian လျန် ဟုသူကပြောသည်
လှပသောစာပိုဒ်တိုများ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အမှန်တရားကတော့ငါကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဝမ်းနည်းခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီစကားစုကတခြားကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေအတွက်အများကြီးအထောက်အကူပြုတယ်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆုတောင်းခြင်းကမင်းကိုစဉ်းစားရန်စာလုံးပေါင်း! ဤဝါကျကိုဂရုတစိုက်ဖတ်ပြီးသင်လိုက်နာရမည့်အဆင့်များကိုလျစ်လျူရှုခြင်းမရှိပဲသင်ပြောသည့်အတိုင်းလုပ်ဆောင်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်တောင်းသောအရာ၏ဆန့်ကျင်ဘက်ရလဒ်များကိုသာရရှိလိမ့်မည်။ သင်နှင့်အတူရှိလိုသူကိုစဉ်းစားပြီးသင့်အားသူတို့၏အမည်ကို ၃ ကြိမ်ပြောပြပါ။ နောက်လာမည့်အပတ်တွင်သင်ဤလူအားအဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကိုစဉ်းစားပြီးသင်ကိုယ်တိုင် ၆ ကြိမ်ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ပါ။ ယခုထိုသူနှင့်သင်လိုချင်တာကိုစဉ်းစားပြီးတစ်ကြိမ်ပြောပါ။ ယခုပြောပါ ... အလင်း၏ရောင်ခြည်ငါသည်သင့်အားမည်သူမည်သည့်နေရာတွင်ရှိနေသည်၊ မည်သူနှင့်အတူရှိနေသည်ကိုရှာဖွေရန်နှင့်သူ့ကိုကျွန်ုပ်အားချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့်ယနေ့နောင်တယူရန်သင့်အားတောင်းပန်သည်။ ငါ့နာမည် - ငါ့နာမ - လာခြင်းမှတားဆီးနေသောအရာအားလုံးကိုတူးပါ။ ငါတို့ကိုစွန့်ခွာထွက်ခွာသွားစေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုဘေးဖယ်ထားပါ။ သူကကျွန်မကိုစဉ်းစားရုံသာမကအခြားမိန်းမတွေကိုပါသူမထင်တော့ဘူး။ သူငါ့ကိုခေါ်ပြီးချစ်တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ မင်းရဲ့လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တဲ့စွမ်းအားအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ တောင်းဆိုတာကိုအမြဲတမ်းဖြည့်ဆည်းပေးပါတယ် ထို့နောက်ဝါကျသုံးကြိမ်တင်ရန်၊ မတူညီသောဆိုဒ် ၃ ခုတွင်တင်ရမည်။ ယုံကြည်မှုများစွာဖြင့် ကြိုတင်၍ သင်၏လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောအကူအညီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်
မာတင် Carrera ဖာရက် ဟုသူကပြောသည်
Martin Carrera Perez အားပြန်ပြောပါ
နောက်ထပ်စိတ်ခွန်အားနိုးထားသောစကားစု -“ ဆက်လေ့လာပါ၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုသည်ယာယီ၊ ကျေနပ်မှုသည်ထာဝရ” forever
ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အားအလွန်စိတ်လှုပ်ရှားစေခဲ့သည့်အတွက်အချိန်ကြာမြင့်စွာကယ်တင်ခြင်းရစေသောမာစတာကိုလေ့လာနေသည်။ ဒါပေမယ့်စိတ်ပျက်စရာတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အကြောင်းအရာနှင့်အတန်းများမရှိသလောက်နည်းပါးသည်။ ဆရာများသည်အလွန်မာနထောင်လွှား။ ကြိုးစားအားထုတ်မှုမရှိကြပါ။ နိုင်ငံတကာကျွမ်းကျင်သူဖြစ်သော်လည်းနိုင်ငံခြားသားများကိုအတော်လေးဆိုးရွားစွာဆက်ဆံကြသည်။
ငါဘာသာရပ်လေ့လာနေသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ပြproblemsနာများကိုအာရုံစူးစိုက်ခြင်းမရှိသော်ငြားယခုကျွန်ုပ်တို့၌စိတ်ပျက်စရာများကြောင့် (ကျွန်ုပ်တို့၌အတန်းများမရှိခဲ့ပါ၊ လေ့လာရန်အကြောင်းအရာများသည်ရှားပါး။ အင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်ခြင်းသို့ရောက်သော်လည်းဆရာတစ် ဦး မှာမူ စာမေးပွဲ၏ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်အခြားအီးမေးလ်ဖြင့်မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်)
အခုငါပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပြီ၊ ငါဘာမှမလုပ်တော့ဘူး၊ ခရစ်စမတ်မှာအမှန်တရားကိုကျွန်တော်အလေးအနက်လေ့လာခဲ့တဲ့တစ်ခုတည်းသောဘာသာတရား၊ ဘာကိုမှမလုပ်ခဲ့ဘူး၊ ငါလည်းမအောင်မြင်ခဲ့ဘူး၊
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၌တက္ကသိုလ်ပြင်ဆင်နေသော ၁၇ နှစ်အရွယ်သားတစ်ယောက်ရှိသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ကျောင်းကိုအခွင့်ကောင်းယူခြင်းမရှိသောကြောင့်သူသည်စိတ်ပျက်ခြင်းနှင့်ထပ်ခါထပ်ခါခံစားမိခြင်းများကိုခံစားရသည်။ မင်းကိုဘယ်လိုကူညီရမလဲ ???
ငါအသက် ၂၂ နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်သည်ဓာတ်ပုံပညာကိုလေ့လာနေသည့်အချိန်တွင်ကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သည်။ သို့သော်သူမကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်နေသည်ကိုကျွန်ုပ်မမြင်ပါ။ အမှန်တရားမှာလှုံ့ဆော်မှုကိုကျွန်ုပ်မတွေ့ပါ၊ ငါ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း၊ အချိန်ဇယားအတိုင်းလိုက်ရန်၊ အခန်းတစ်ခန်းတွင်သော့ခတ်ထားရန်ကျွန်ုပ်အတွက်လုံးဝအလုပ်မလုပ်ပါ။ /
Fernandez PAMELA ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ။ မင်းရဲ့အားလပ်ရက်ပံ့ပိုးမှုလိုအပ်တယ်။ အစိုးရတက္ကသိုလ်တက်ပြီးနှစ်နှစ်အကြာကတည်းကအများပြည်သူသိထားတာကငါ့ကိုအများကြီးကုန်ကျတယ်။ သူတို့၏ဝန်ခံချက်သည်ရှုပ်ထွေးသည် (UNIVERSIAD NACIONAL DE CUYO ABOGACIA) ARGENTINA MENDOZA, ကျွန်ုပ်သည်ရဲအရာရှိတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဥပဒေအရနှစ်သက်သောသူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဥပဒေကြိုက်နှစ်သက်သူ ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်တစ်နေ့လုံးအလုပ်လုပ်ပြီးကတည်းကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုအတွက်စိတ်ဓာတ်မကျပါ။ ငါmultiplရိယာထဲမှာငါပြmultiplနာတွေအများကြီးကိုလက်ခံရရှိသောကြောင့်ငါကငါဖြစ်လိမ့်မယ်ငါတွေးမိ ... ငါတွေးမိလေ့လာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အဘယ်အရာကိုငါတကယ်မဟုတ်ပါဘူး ... ? အလိုတော်မရှိခြင်းကြောင့်?
FERNANDEZ PAMELA သို့ပြန်ပြောပါ
ငါလေ့လာချင်တဲ့စိတ်ကိုငါမခံစားရဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါလေ့လာတဲ့အလုပ်အကိုင်ကိုမကြိုက်ပေမယ့်ငါကြိုက်တဲ့နေရာကပြည်နယ်မှာမရှိဘူး၊ အဲဒါကိုဖြုတ်ပစ်လိုက်ဖို့ကသီးသန့်ဖြစ်ပြီးငါဘာမှမလုပ်ဘဲနေဖို့မတူညီတဲ့အလုပ်အကိုင်တွေကိုနှစ်ကြိမ်ချန်ထားခဲ့တယ် :( အကျွန်ုပ်ဘိုးဘေးများကိုစိတ်ပျက်စေခြင်းငှါ၎င်း၊
ငါ you သင် the ကြိုးစား as r ပြိုင်ပွဲတခုခုလုပ်ရန် and ကြိုးစား as သည်ငါနှင့်အတူတူပါပဲ၊ ငါမကြိုက်တော့ကြောင်း knowing မငြင်းမီသိသည်။
မင်းထင်တာကိုမင်းလုပ်မယ်လို့ထင်တယ်၊ ဘွဲ့ယူတာဟာအားလုံးမဟုတ်ဘူး။ လေ့လာမှုကိုရပ်တန့ ်၍ အလုပ်တစ်ခုရှာရန်၊ သူတို့ပြောသည့်စကားများ၊ ငါတို့မိဘများမည်သို့တုံ့ပြန်မည်ကိုပင်ကျွန်ုပ်တို့အလိုရှိသည့်အတိုင်းနေထိုင်ပါ၊
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၁၇ နှစ်ရှိပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်အထက်တန်းကျောင်းတစ်နှစ်ပြီးဆုံးရန်လိုအပ်ပြီးယခုအချိန်အထိကျွန်ုပ်သည်ကျောင်း၌ကောင်းမွန်စွာနေထိုင်လျက်ရှိနေသည်။ ကျွန်ုပ်၏ပြisနာမှာဖေဖော်ဝါရီလတွင်တက္ကသိုလ်၌ကျွန်ုပ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲအတွက်စာရွက်စာတမ်းများနှင့်ကျွန်ုပ်မိဘ၊ ငါတက္ကသိုလ်ဆက်လုပ်ဖို့ငါ့ကိုအများကြီးကူညီပေးပါ၊ အဖေကကျွန်မကိုအရမ်းကောင်းတဲ့လမ်းညွှန်တစ်ခုတောင်ဝယ်ပေးခဲ့တယ်။ ဆိုလိုတာကငါမှာပညာသင်ဖို့တတ်နိုင်သမျှရှိတယ်၊ ငါလုပ်ဖို့လှုံ့ဆော်မှုမရှိဘူး၊ လူတိုင်းကငါ့ကိုထောက်ခံတယ်၊ ငါလိုတာကိုပေးမယ် အဲဒီစာမေးပွဲအတွက်လေ့လာချင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါကတော့အဲဒါကိုလုပ်ချင်စိတ်မရှိဘူး၊ ငါအကြံဥာဏ်ဒါမှမဟုတ်လှုံ့ဆော်မှုတချို့လိုချင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတက္ကသိုလ်မှာနေဖို့စာမေးပွဲအောင်ချင်ရင်ငါဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး
ဟေး၊ ငါနုသေးသေးတယ်၊ ၁၆ နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။ မင်းလိုများများလိုပဲငါမလေ့လာချင်တော့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုနဲ့ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပေးဆပ်ရတာပိုကောင်းတဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်၊ မိသားစုသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးရှိသောဘ ၀ ကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ လက်ရှိတွင်ကျွန်ုပ်သည်အကောင်းဆုံးကျောင်းသားများသာ ၀ င်ခွင့်ရသည့်အထူးကျောင်းတစ်ခုတွင်လေ့လာနေသည်။ သို့သော်သူတို့မ ၀ င်သင့်ဟုယူဆသူများစွာရှိသည်။ သို့သော် အကယ်၍ သူတို့ဆန္ဒရှိလျှင်၎င်းတို့သည်ကျော်လွှားနိုင်လိမ့်မည်။ အတိုချုပ်ပြောရရင်၊ ဒီကျောင်းမှာလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်သည်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်။ အမြဲတမ်းအကဲဖြတ်ခြင်းဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်သည်ကျွန်ုပ်ကိုအများဆုံးအကျိုးသက်ရောက်သည်၊ ဒီကျောင်းမှကျွန်တော်အများကြီးလေ့လာသင်ယူခဲ့ပြီးပါပြီ၊ ဘာသာစကား ၃ မျိုးကိုတတ်မြောက်နိုင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီအရာအားလုံးရဲ့စျေးနှုန်းကအရမ်းကိုများတယ်၊ ငယ်ငယ်ကတည်းကယူခဲ့တဲ့၊ ကိုယ့်အတွက်အချိန်သိပ်မပေးရဘူးဆိုတာငါသိတယ်။
ကောင်းပါပြီ၊ ဘယ်လောက်ပဲစိတ်ရှုပ်နေပါစေ၊ ဆက်လုပ်သင့်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်လုပ်စိတ်ပျက်မိပါတယ်၊ မတတ်နိုင်ဘူးလို့ခံစားမိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီအကြံပြုချက်တွေကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုလက်လျှော့အရှုံးမပေးဘဲမထားပါနဲ့၊ အဲဒါဟာသော့ချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ငါအရမ်းဆန္ဒရှိသမျှသောအောင်မြင်မှုအတွက် ... ??
မင်္ဂလာပါ၊ ယခုနှစ်ကျွန်ုပ်၏နည်းပညာဆိုင်ရာအသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှုပြီးဆုံးသွားပြီ၊ ယခုတွင်ငါသည်လေ့လာသင်ယူထားသည့်အကြောင်းအရာများအားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအတွက်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်ဟုခံစားမိပြီးတစ်နေ့လျှင် ၈ နာရီအလုပ်လုပ်ရန်စိတ်ကူးကိုလည်းမကြိုက်ပါ။ အခုငါအနားယူနေပြီ၊ ဘယ်အကြံဉာဏ်မှရမလဲ။
ထိုစကားစုက“ TIREDNESS သည်ခေတ္တခဏသာဖြစ်ပြီး၊
ဟယ်လို! ကျွန်ုပ်သည် ၁၈ နှစ်ဖြစ်ပြီးအင်ဂျင်နီယာပထမနှစ်တွင်ပါ ၀ င်ပါသည်။ ငါလေ့လာတော့မယ်လို့ပြောတာကြောင့်၊ အရမ်းခက်ခဲပြီးရှုပ်ထွေးတယ်ဆိုတာကိုလူတိုင်းကဆက်ပြောကြတယ်။ မိဘတွေတောင်မှငါ့ကိုသံသယဝင်ကြတယ်။ ငါတတ်နိုင်သလောက်သူတို့ကငါ့ကိုသိပ်မခက်ဘူးဆိုရင်သူတို့ပေးရမယ့်အရာအားလုံးနဲ့ကျွန်တော့်ကိုဆိုင်းငံ့ခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ငါ့ကိုမေးတယ်။ အဆိုးဆုံးကတော့အထက်တန်းကျောင်းဆရာမတ ဦး ကိုကျွန်တော်ပြောတော့သူက“ မင်းကိုအင်ဂျင်နီယာပိုင်းမှာငါမတွေ့ဘူး။ ငါပြောင်းလဲခဲ့ဖူးတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အင်ဂျင်နီယာဆိုတာခက်တယ်” ငါဆိုလိုတာကသူတို့ကငါ့ကိုငါ့ကိုမိုက်မဲတဲ့မျက်နှာနဲ့တွေ့လား။ သူတို့လုပ်ချင်တာကိုသူတို့နားမလည်တာလား။
ဒီကြောက်ရွံ့မှုနဲ့ကျွန်တော်စခဲ့တာခက်ခဲပြီးရှုပ်ထွေးတယ်၊ ငါအထက်တန်းကျောင်းအတွက်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲမပေးသောအချက်လည်းရှိ၏။ အစပိုင်းမှာတော့သင်ရိုးဟာ Baccalaureate အပြင်တခြားအရာတွေပဲဆိုတာသိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အနည်းငယ်ဖြေလျော့ခဲ့တယ်။
ပြproblemနာကစာမေးပွဲတွေစလုပ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ဟာအရမ်းရှုပ်ထွေးလိမ့်မယ်လို့ဘယ်တော့မှမတွေးဘူး။ ငါစာမေးပွဲနှင့်ငါရရှိသောအတန်းကိုကြည့်သောအခါလူများပြောသမျှအရာအားလုံးသည်သတိရသွားသည်။ သို့သော်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး ၏စကားများကကျွန်ုပ်၏စိတ်ကိုထိုးဖောက်ပြီးဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်လှုံ့ဆော်ခဲ့သည်။ ဒီအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းမှာကျွန်တော့်ကိုအထင်သေးတယ်။ သင်ရုံအရာအားလုံးလိုပဲလေ့လာဖို့ရှိသည်။ စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့လား ငါတတ်နိုင်တယ်သိလား သူ၏စကားများကကျွန်ုပ်အားမည်မျှခွန်အားပေးသည်ကိုသူတို့မသိကြပါ။ အကယ်၍ သူသည်ကျွန်ုပ်အားစွန့်ခွာပြီးပြီဟုမပြောခဲ့ပါကကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ငါ့ကိုဆက်လက်ခွန်အားပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
အဲဒါကငါ့ကိုလုံးဝမကူညီဘူး၊ ငါစဖတ်တယ်၊ နားမလည်တော့ဘူး၊ ငါဖတ်တာကိုဒုတိယဆုံးရှုံးသွားတယ်၊ ငါဘာလုပ်ရမလဲ။ ငါစားပွဲပေါ်မှာငါရှိနေသော်လည်းငါအိပ်ပျော်အဆုံးသတ်င်ကစိတ်ပျက်စရာ
VIVIANA CARMONA ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်တက္ကသိုလ်ဘ ၀ အတွက်လှုံ့ဆော်မှုတစ်စုံတစ်ရာမှမခံစားရပါ။ ထို့အပြင်သူတို့သည်ကျွန်ုပ်အားအလုပ်တစ်ခုလုပ်ရန်အချိန်မပေးနိုင်ပါ
VIVIANA CARMONA သို့ပြန်ပြောပါ
ကျွန်ုပ်တို့မ ၀ င်သင့်သည့်အရာ ၅ ခုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့မလုပ်သင့်သောအရာ ၅ ခု